Laser bilicsan, Mashiinnada Quruxda, Aaladaha Laser-ka Caafimaadka - Iibiyaha
HIFU Mashiinka ka hortagga gabowga
Co2 Mashiinka Laysarka Jajabka ah
Cryolipolysis mashiinka miisaanka luminta
EMSlim Body Sculpt mishiinka
H2O2 Space Ogsajiinta
Wadnaha dheer ee 1064nm Nd Yag laser Machine
Xusuusin ETCO2 Capnograph
Mashiinka Quruxda badan ee shaqada
Q dajiyay Nd Yag Laser Machine
Mashiinka Qaadista RF
Nidaamka Falanqeeyaha Maqaarka
Warshada KR LAASER
Shabakadda Iibka Caalamiga ah
IPL (Iftiin xoog leh oo garaaca)
Islaaydh soo socda▶︎
Ku Soo Dhawoow KR Laser
KR LASER waxay u hurtay inay siiso xalal-joojin ah oo ku saabsan quruxda caafimaadka ee Salon, Hospital, Clinics macaamiisha. Waxaan haynaa 808nm Diode Laser Machines timaha ka saara, Mashiinada qaboojinta, Mashiinada HIFU, 980nm diode laser xididdada xididdada mashiinada, mishiinada pulsed Light (IPL) adiga kuu gaar ah.
Waxaan leenahay waaxdayada Cilmi-baarista & Horumarinta, kooxda ganacsiga ee da'da yar oo leh hufnaan sare, qaybiyeyaasha dibadda iyo waaxda iibka kadib.
Had iyo jeer waxaa jira xal dhibaatadaada!
Tattoo ka saarida
Timaha oo laga saaroKulul
Mashiinka Laser-ka ee Picosecond
Mashiinka Laser-ka ee Picosecond waa caafimaad, xal qurux badan oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay Choasma, Age spot, Nevus ...
Q Dareema ND YAG Mishiinka Saaridda Shattoo
Mashiinka saarista laser-ka ee Q Switched ND YAG Tattoo waa mid caafimaad qaba, oo lagu kalsoonaan karo oo quruxsan oo loogu talagalay Rem
Q Dajiyay Nd YAG Tattoo Mashiinka Saaridda Laysarka
Aragtida Daaweynta Qaadashada saamaynta qarxa ee iftiinka, Super Picosecond Laser&......
1200W Mashiinka saarista timaha timaha Diode
Mashiinka Ciribtirka timaha ee 1200W Diode waa mid caafimaad qaba, xalka quruxda lagu kalsoonaan karo ee h Joogtada ah.
Mashiinka timaha ka saarista Diode
Daawaynta Theory Diode qalabka laser wuxuu qaataa 808 nm, 755nm iyo 1064nm, gaar ahaan ......
Saddex ku jira Hal Mishiin oo kala duwan
Aragtida daawaynta SHR: SHR ama ka saarida timaha sare waa tignoolajiyada ka cusub......
Aragtida Daawaynta Shaqooyinka Kala Duwan waa daryeel waji oo dhamaystiran oo hufan ......
Mashiinka Laysarka Jajabka ah ee Co2 waa caafimaad leh, xalka quruxda lagu kalsoonaan karo ee cusboonaysiinta maqaarka iyo dib u soo celinta
Nidaamka Qaabka Laser-ka ee 6D Cryolipo
Habka Qaabka Laser-ka ee 6D Cryolipo(Qalabka 6D Laser Slimming Noofembar) waa caafimaad qaba, la isku halleyn karo...
Xoog sare oo koronto muruqa jirka oo sawiraya baruurta gubanaya mashiinka dhismaha murqaha
Aragtida Daaweynta Qaboojinta Qaboojinta & Tababarka Murqaha Qaboojinta Dhaqdhaqaaq aan Duulaan ahayn......
7D HIFU Mishiinka Ultrasound Diiradda La Qaadan Karo
Mashiinka Ultrasound ee la qaadan karo ee 7D HIFU Focused Ultrasound waa caafimaad leh, xalka quruxda lagu kalsoonaan karo ee wejiga l ...
980nm Qalliinka Diode Laser Machine
Mashiinka Qalliinka Diode Laser ee 980nm waa caafimaad caafimaad qaba, xalka quruxda lagu kalsoonaan karo ee dhaawaca xididdada ...
Mashiinka 'Super Picosecond Nd YAG Laser Machine' waa mid caafimaad qaba, oo xal qurux badan lagu kalsoonaan karo oo ka saar dhammaan k...
Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno marxalad kasta oo aad ku kobcineyso dhaqankaaga.
Waxaan bixinaa OEM&ODM, tababar, taageero farsamo, iyo bixinta adeegyo dayactir oo kala duwan.
Toos u ah warshad. Siyaasadda taageerada qiimaha ugu fiican ayaa kaa dhigi doonta inaad aad u sii xoogeysato.
24/7 Kooxda taageerada farsamada ayaa diyaar u noqon doonta wakhtiga loogu talagalay inay kuu sameeyaan xalal caafimaad oo qumman.
Waxaan had iyo jeer raadineynaa iskaashi ganacsi oo lala yeesho wakiilada adduunka oo dhan. Waxaan si daacad ah kuugu martiqaadaynaa inaad ka mid noqoto xubnahayaga Qoyska KR LASER.
Waxaan raadiyaa bukaan kasta in lagu daweeyo tayada ugu sareysa, iyo daaweyn kasta si ay u keento qurux, muuqaal dabiici ah. Laysarka KR waa habka ugu wanaagsan ee looga saaro tattoos aan loo baahnayn dhammaan noocyada maqaarka oo leh badbaado iyo waxtar sare leh.
In muddo ah waxaan bixinayay ka saarista tattoo-ga oo leh Q-switched Nd:YAG system, laakiin waxaan ogaaday kororka bukaanada leh tattoos midabka leh. Waxaan rabay inaan hubiyo in bukaanadayda la siiyay natiijooyinka ugu fiican, iyadoon loo eegin midabada khad ee ay soo bandhigeen, taas oo ah sababta aan u doortay inaan ku daro leysarka KR ee ku celcelintayda. Waxaan ku aragnay jawaabo cajiib ah khadkiga diidmada ah.
Hadafkayagu waa in aan samayno daawaynta soo saarta natiijooyin heer sare ah dhammaan bukaannadayada. KR Laser-ka ayaa ka caawiyay qaar badan oo ka mid ah bukaannadayada inay arkaan natiijooyin cajiib ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dooranay tignoolajiyadan gees-ka-goynta dhammaan daawaynta tattoo-saaristayada.
KR LASER waxaa la aasaasay 2008. Shirkaddu waxay ku taal magaalada Beijing, Shiinaha. Waa soo-saare xirfad leh oo si degdeg ah u koraya. Waxaan inta badan diiradda saareynaa naqshadeynta iyo soo saarista qalabka qurxinta laysarka caafimaadka.
Xidhiidhiyayaasha Caanka ah
Dhismaha No.2, No.1 Dayrka, No.2 Jidka, Wuliqiao, Degmada Chaoyang, Beijing, Shiinaha
Huochetou Industry Park, 12 Oufu Rd. Yanjiao, Bariga Beijing, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda © 2008-2022, Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
Mareegtan waxay isticmaashaa Kukiyada si ay u horumariso khibradaada wax raadinta iyo inay ka caawiso suuqgeynteena.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan ka saarista Kukiyada halkan: Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Waan ku raacsanahay siyaasaddan khaaska ah
Alaabta ku calaamadsan * ayaa loo baahan yahay
Haa, waxaa fiicnaan lahayd inaad tan buuxiso, waa loo baahan yahay. Haa, waxaa fiicnaan lahayd inaad tan buuxiso, waa loo baahan yahay. Haa, waxaa fiicnaan lahayd inaad tan buuxiso, waa loo baahan yahay.
Haa, waxaa fiicnaan lahayd inaad tan buuxiso, waa loo baahan yahay.